Goormaa Ayaan Ka Dhigtaa Xilliga Dhalashada? |
Jahawareerka Dhalaanka iyo Mooganaanta Walidka||Tukesomalism.com
Cabdijabaar Sh. Axmed, February 16, 2016
Waxaa magaalada Muqdisho ku soo badanaya waayadan tan xafladho dhalasho, oo ay qabsanayaan dhallinyarada Xamar, wiilal iyo gabdhaba. Xafladahaas waxaa lagu dhigaa hoteellada magaalada, waxaana lagu casuumaa oo ka qeyb gala, keliya dhallinyarada (gabdho iyo wiilal), kuwaas oo sida Yooyoogii dhar dhejis ah u wada qaba. Waxaa la soo kireystaa koox fannaaniin ah ama muustiko iyo sameecado waaweyn baa la keensadaa, kolkaas baa habeenkaas oo dhan, wiilal dhar dhejis ah oo qaar jeexjeexan yihiin qaba iyo gabdho faruuryo gaduudan, funaadano iyo siraawiil khafiif ah oo ku dheggan qaba, oo inta dhexda is qabsadaan, marna afka is gelinaya marna isku niikinaya.
Laba xafladood oo dhalasho oo marar kala duwan lagu qabsanayey hoteelka Qumbe oo ku yaalla Liido ayaan ka dul dhacay, aniga oo hoteelkaas u tagay mija baxsi iyo madax furfurasho. Muustiko xooggan inta maqlay – baa faduushayda – galay hoolka ay ka socoto, oo qof kasta loo oggol yahay, markaas baan meesha waxa aan ku arkay wax la la yaabo. Si kale kuugu ma sheegi kara e, waxa ay ahaayeen faddaro Shaydaan ku hirgisayey.
Waxa aan ba u maleeyey in aan joogo Faransiiska oo waxaas lagu sheegi jiray. Inta yaabay ayaan weydiiyey waxa ay xafladdu ahayd, markaas baa la igu yiri, waa xaflad dhalasho, iyada oo la ii tilmaamay qofka dhiganayey oo ahayd gabar aysan waxba u qarsoonayn. In dadkani waddanka gaalo ay ka yimaadeen ayaan u malaynayee, waxa ayba ii sheegeen, hal qurbejoog ah oo gaalo la dhaqan ah in uusan ku jirin!
Aniga oo arrintaas la yaabban ayaan habeen habeennada ka mid ah, aniga oo fadhiya meel maqaayad ah, waxaa meel ii dhaw soo fariistay afar wiil. Waa tannaagoonayeene, sidii ay u sheekeysanayeen ayey ka hadleen in ay u baahan yihiin in ay dhalasho samaystaan. Waxa ay dhasheen intii burburku socday, oo kaar dhalasho ma haysane, waxa ay ka hadlayeen xilliyada ay ka dhiganayaan dhalashada. Laba ayaa isku qabsatay 14ka Feebarweri, oo ay la haayeen maalinta jacaylka. Muran yar ka dib mid baa loo daayey maalintaas. Cabbaar haddii ay arrintaas ka hadlayeen, waa kala duwdeen xilliga dhalashada oo afar bil oo kala duwan iyo maalmo kala gaar ah ayey ka dhigteen.
Hadda Xamar, dhallinyarada aad bay u jecel yihiin xafladdaasi, laakiin, su’aasha ugu badan ee ay ka fekeraan inta aysan samaysan xafladdaas, waxaa weeye, goorma ayaan ka dhigtaa xilliga dhalashada?
Tags: Goormaa Ayaan Ka Dhigtaa Xilliga Dhalashada?
Next post Gabadhii Caqliga Badnayd!
Previous post Tuuggii Naxariista Badnaa!